के बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? अब सुनको भाउ त ७१ हजार पुग्यो नि ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
के बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? अब सुनको भाउ त ७१ हजार पुग्यो नि !
सुनको भाउ हालसम्मकै महंगो भएको छ । लगातार मूल्य बढिरहेको सुनको भाउ मंगलबार ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सूनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार दुईदिनसम्म स्थिर रहेको सुनको भाउ मंगलबार एकैपटक एक हजार रुपैयाँले बढेको हो ।
भाउ आकासिएपछि गहना बजारमा सुनको कारोबार लगभग शुन्यप्रायः छ । बैंकहरुले खरिद गरेको काँचो सुन पनि लकरमै थन्किएको छ । आज मंगलबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ७ सय र चाँदीको प्रतितोला ८ सय ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
सुनको भाउ यसरी नै महंगिए साउनलगत्तै शुरु हुने बिहेबारी पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । तडकभडक नगरी सामान्य तरिकाले बिहे गर्ने आदर्श परिवार र जोडीलाई समस्या नभएपनि भड्किलो रवाफ देखाउनुपर्ने र सुनैसुनमा पुरिन खोज्नेहरूको विवाह महंगिने निश्चितप्रायः छ ।